“14th Afọ ise Atụmatụ” amalite, Fuzhou accelerates na-ewu nke “obodo” - China Foshan Hermes Steel
CNC Laser tingcha
mirror igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
leghaara igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Hairline igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
No.4 igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Omume ọma jijiji igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Igwe anaghị agba nchara Sheet
PVD Agba mkpuchi igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
etched igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Embossed igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Stamped igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Bead Blasted Igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Laminated igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Igwe anaghị agba nchara Bipute Mgbaaka
Igwe anaghị agba nchara Elevator Door Panel
Igwe anaghị agba nchara Elevator Wall Panel
Igwe anaghị agba nchara Igwe Mbuli N'uko
Igwe anaghị agba nchara Igwe Mbuli Handrails
igwe anaghị agba nchara Screen
Perforated igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Checkered igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Mosaic igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
3D Laser igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
“14th Afọ ise Atụmatụ” amalite, Fuzhou accelerates na-ewu nke “obodo”
Otu izu gara aga, ọrụ 21 na Luoyuan Bay Port Area nke "Silk Road Seaport City" na Fuzhou bịanyere aka na ya, na mkpokọta ego nke ijeri 35,4 ijeri (RMB, otu dị n'okpuru). N'etiti ha, nnukwu ụlọ ọrụ pụrụ iche nke ụlọ ọrụ ihe eji eme ihe dị elu nke China Baowu Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd. wuru ma wuru ya, tinyere ngụkọta ego nke ijeri yuan 10, ga-ewu 3,22 nde tọn nke ngwaahịa boutique na Luoyuan Bay na ndabere nke ogo Baosteel Desheng. Ngwongwo igwe anaghị agba nchara.
Ndị isi obodo ahụ gwara ndị nta akụkọ China News Agency na 8th na nkwekọrịta nkwekọrịta a ga-eme ka nkwalite nke ụlọ ọrụ Luoyuan Bay na-eme ngwa ngwa ma kwalite nkwalite nke "Silk Road Seaport City" iji wuo ụlọ ọrụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Nke ji nwayọ nwayọ na-ebili "Silk Road Seaport City" na Fuzhou bụ microcosm nke ngwa ngwa Fuzhou nke "obodo". Mgbe ọ banyere na "GDP karịrị otu puku ijeri yuan club" maka oge mbụ, Fuzhou nọgidere na-enwe ọganihu, na-eme ike ọ bụla iji kpatụ "ogwe osisi", wuo ụlọ "Haisi", ma gbalịa ịghọ obodo etiti mba.
"Atụmatụ nke iri na anọ nke afọ ise" malitere. Fuzhou emewo ka o doo anya na n'ime afọ ise na-esote, ọ ga-elekwasị anya na iwu "obodo" isii dịka Fuzhou Binhai New City, Fuzhou University City, Southeast Auto City, Silk Road Seaport City, Fuzhou (Changle) International Aviation City , na Obodo Lọjistik nke Oge A. Nwee obi uto na "oku nzuko" iji mee ka ngwa ngwa nke obodo obodo di ugbua.
Dabere na atụmatụ a, “ebumnuche siri ike” maka mmepe nke Fuzhou n'oge “afọ iri na anọ nke atụmatụ afọ ise” bụ: inweta mmụba ọhụrụ na ọkwa ike isi obodo, na-agbasi mbọ ike ijide nkezi uto kwa afọ nke 7% na GDP, mpaghara e wuru ewu banyere ihe dị ka kilomita 500, na ndị bi n'obodo na-adịgide adịgide nke 500 puku mmadụ iri, isi obodo nke isi obodo na ike nke radieshị abawanyela nke ọma.
Huang Maoxing, onye isi nke oflọ Akwụkwọ nke Economics nke Mahadum Fujian Normal, kwenyere na iwu obodo isii nke oge a ga-enye nkwalite nkwado maka ogo na ngwa ngwa Fuzhou.
Na mbido afọ ọhụrụ, etinyere obodo isii nke oge a na Fuzhou. Na ndịda ọwụwa anyanwụ Auto City emi odude ke Minhou County, Fuzhou City, na 203 Provincial Highway ịgbasa na nwughari Project, na Lanpu Industrial Park Project, na Dongtai High-ọgwụgwụ New Ihe Industrial Park oru ngo na-ngwa ngwa. Ye Renyou, odeakwụkwọ nke Kọmitii Kọmitii Minhou County kwuru na ịchịkọta otu nnukwu ọrụ nkwado ụgbọ ala ga-emejuputa usoro siri ike iji gbakwunye ụlọ ọrụ ụgbọ ala, gbasaa ma wusie ụlọ ọrụ ụgbọ ala ike, ma gbalịsie ike iwulite obodo ndịda ọwụwa anyanwụ ọwụwa anyanwụ na mmepe mmepe nke ndị mmadụ, ụlọ ọrụ na obodo.
Na Binhai New City nke Fuzhou, ọrụ Fujian Berry Hekang Digital Life Industrial Park (Phase II) malitere n'oge na-adịbeghị anya, yana ngụkọta ego nke ijeri 1.678 ijeri, na-elekwasị anya na igwe ojii na kọmputa, usoro ntinye mkpụrụ ndụ, edezi mkpụrụ ndụ, ọgụgụ isi na teknụzụ ndị ọzọ dị elu. iwu ulo data na mmeputa Base, ulo R&D na otutu oru ndi ozo, ndu ndu ndu na ulo ogwu. Nke a bụ otu ụzọ mbido nnukwu ọrụ na mpaghara Fujian iji bido lekwasị anya na mbido usoro "afọ iri na anọ nke afọ ise."
Mee ngwangwa iwu "obodo", Fuzhou ga-egosiputa nkwado ụlọ ọrụ. N'ajụjụ ọnụ, Fuzhou Mayor Men Mengjun kwuru na ụlọ ọrụ bụ nkwado kachasị mkpa iji kwalite mmepe dị elu n'ụzọ niile, na ihe ọhụrụ bụ ikike izizi mbụ.
N'ileghachi anya na "Atụmatụ nke Iri na Atọ nke Iri na Atọ," n'ihi mmụba nke ụyọkọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ise dị ka ijeri 100 dịka akwa, eriri kemịkal na nri ụlọ ọrụ ọkụ, a na-atụ anya na uru Fuzhou na-emepụta ihe karịrị 1.1 trillion yuan . Ruo "atụmatụ nke iri na anọ nke afọ ise", Fuzhou ga-anọgide na-ejide "niubi" nke ụlọ ọrụ ahụ ma ghara ịkwa ahụ, nyere aka dọta ndị isi buru ibu, zụlite ụyọkọ buru ibu, ma zụlite nnukwu ụlọ ọrụ.
Uru nke ndị China na Taiwan na mba ofesi bụkwa nnukwu ihe enyemaka nye Fuzhou iji mee ka iwu "obodo" dị ngwa. Fuzhou bụ obodo ama ama ama amaala na ofe ofesi ofesi na ebe obibi nna nna dị mkpa nke ndị mba Taiwan. Enwere ihe karịrị nde mmadụ anọ na mba ofesi na mba 177 na mpaghara ụwa. Huang Maoxing kwenyere na ikpokọta amamihe na ike nke ndị agbata obi n'ụlọ na mba ofesi iji gbalịsie ike inweta isi obodo, ikike na teknụzụ n'ụlọ na mba ọzọ iji gbakọta na Fuzhou ga-eme ka iwu obodo isii nke oge a gụnyere Fuzhou Binhai New City, South East Auto City. , na Silk Road ọdụ ụgbọ mmiri City. Na-akwalite "usoro abụọ" ma jeere usoro mmepe ọhụụ. (Emecha)
Post oge: Mar-19-2021
Tinye: 21 / F, Block 1, Jinchang International Metal Trading Market, Chencun, Shunde, Foshan, Guangdong, China
Ekwentị: + 86-757-29273045
Ekwentị: + 86-757-29273047
Ekwentị: + 86-757-29273033
Ekwentị: 0086 13516572815
Emebere na China